ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်စားသုံးနေကျတဲ့ပေါင်မုန့်ဟာ ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သလဲ ? ဘယ်လူမျိုးက ဘယ်နိုင်ငံမှာတီထွင်ခဲ့တာလဲ ??
စာလေးရှည်ပေမဲ့ ဖတ်ပေးကြပါနော် ။ Baker ဝါသနာရှင်ကော အခြားသူတွေပါ အကုန်သိထားသင်တဲ့ အသိပညာလေးတစ်ခုမို့လို့ပါ ။
ကျွန်တော်တို့ နေ့စဉ်စားသုံးနေသော ကလေးလူကြီးမရွေးကြိုက်တဲ့ ပေါင်မုန့်ဟာ ဘယ်လိုကနေစဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်…ဘယ်လိုသမိုင်းကြောင်းကနေစခဲ့တယ်ဆိုတာကို သိတဲ့သူကရှားပါတယ်။ အခုကျွန်တော်ပြောပြချင်တာကတော့ ပေါင်မုန့်ပြုလုပ်ခြင်း ပေါင်မုန့်စားသုံးခြင်းရဲ့ အဓိကသမိုင်းကြောင်းကို ပြောချင်တာပါ။ သမိုင်းအထောက်အထားတွေအရ လွန်ခဲ့သော BC 8000 ခုနှစ်လောက်မှာ အီဂျစ်လူမျိုးတွေဟာ Quren ဆိုတဲ့ ဂျုံစေ့ကြိတ်တဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ပစ္စည်းကနေအစပြုပြီးတော့ ပေါင်မုန့်ပြုလုပ်နည်းကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ အနီးစပ်ဆုံးပြောရရင် အဲ့ပထမဆုံးစလုပ်တဲ့မုန့်က အိန္ဒိယလူမျိုးတွေရဲ့ ရိုးရာအစားအစာဖြစ်တဲ့ ချပါတီနဲ့တောင် ဆင်တူပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့ အီဂျစ်လူမျိုးတွေက ဘီယာလုပ်တဲ့ ပညာရပ်မှာလဲ ထူးချွန်ကြပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့် သူတို့ရဲ့ ဘီယာလုပ်နည်းကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ သူတို့အပူပိုင်းဒေသရဲ့ ရာသီဥတုအခြေအနေကို ရောစပ်ပြီးတော့ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး (Sourdough) ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော်တို့မြန်မာအခေါ် ပေါင်မုန့်ကြမ်းကို တီထွင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Sourdough ရဲ့ ပါဝင်ပစ္စည်းဟာ ၃ မျိုးပဲ ရှိပါတယ်။ ဂျုံ၊ ရေနှင့် တစေးတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နှစ်တွေအများကြီးဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးနောက်မှာ ပေါင်မုန့်လုပ်နည်းဟာ ကမ္ဘာပေါ်ရှိနိုင်ငံအနှံ့ကို ပျံ့နှံ့သွားခဲ့ပြီးနောက် အချို့နိုင်ငံတွေက အီဂျစ်တွေရဲ့ မူပိုင်လက်ရာတွေကနေခွဲထွက်ပြီး လုပ်နိင်ခဲ့ပေမဲ့ အချို့နိုင်ငံတွေကတော့ မူလ လက်ရာ အတိုင်းပဲပြုလုပ်နေခဲ့ကြတယ်။
BC 450 လောက်မှာ ရောမ လူမျိုးတွေက ရေလှည့်ဒလက်ယန္တာရားကို တီထွင်ခဲ့ပြီး ပေါင်မုန့်တွေကို အဆက်မပြတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ပုံစံအသစ်တွေကိုလဲပြောင်းလဲ ပုံဖော်ခဲ့ကြတယ်။ အဲ့လိုနဲ့ ပေါင်မုန့်ပညာရပ်ဟာ စားသုံးရုံပညာရပ်မှတစ်ဆင့် အဆင့်မြင့်ပြီးအသေးစိတ်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲ့နောက်မှာတော့ လူချမ်းသာရောမလူမျိုးတွေဟာ ပညာတတ်နဲ့ ချမ်းသာသောရောမလူမျိုးများအတွက် အရည်အသွေးမြင့်ပြီး ပေါင်မုန့်အသားကောင်းတဲ့ ပေါင်မုန့်ဟာ သင့်တော်တယ်လို့ သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အလားတူဗြိတိန်မှာလဲ အေဒီ၁၁၀၀ နှင့် ၁၄၀၀ ခန့်မှာ ပေါင်မုန့်ဖုတ်ခြင်းဟာ ပိုမိုကောင်းမွန်လာပြီး အဓိကကျတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ သူတို့တွေဟာလဲ အဆင့်မြင့်လူတန်းစားတွေဟာ ပေါင်မုန့်ဖြူ၊ ပေါင်မုန့်အကောင်းနှင့်ပဲ သင့်တော်ပြီး အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်ကတော့ ပေါင်မုန့်ကြမ်းဟာ အသင့်တော်ဆုံးပဲလို့ သတ်မှတ်ကြပါတယ်။
BC 600 မှာတော့ ပါရှားလူမျိုးတွေက လေဒလက်ကို စတင်ီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါနဲ့ဂျုံစေ့တွေကို ကြိတ်ပြီး သုံးခဲ့ကြတာပေ့ါ။ အဲ့ဒါနဲ့ အားကျမခံ မက်ဆီကို လူမျိုးတွေက BC 100 မှာ ကျောက်တုံးနဲ့ လှိမ့်ပြီး ခြွေရတဲ့ ဒလှိမ့်တုံးကို တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။
1834 မှာ Switzerland နိုင်ငံသားတစ်ယောက်က စတီးနှင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒလှိမ့်တုံးကို တီထွင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ ပေါင်မုန့်ပညာရပ်ကို တစ်ခေတ်ဆန်းသစ်စေနိုင်ခဲ့တယ်။ ဂျုံစေ့တွေကို ကြိတ်နေမယ့်အစား Roller System က ကူညီပေးခဲ့တယ်။ အဲ့လိုအသုံးပြုခဲ့ခြင်းက ဂျုံစေ့၊ ဂျုံအခွံနှင့် ဂျုံမှုန့်ကို ခွဲခြားရာမှာ လွယ်ကူစေခဲ့ပါတယ်။ 20 ရာစုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ဓာတုပစ္စည်းတွေ ဝင်ရောက်လာပြီး နောက်မှာ ပေါင်မုန့်အသားတွေက ပိုဖြူလာပြီး ပိုချောမွတ်၍ ပိုပြီးလည်းကြာရှည်ခံအောင် Chemical နဲ့ပေါင်းစပ်အသုံးပြုကြတယ် ။
အဲ့လိုနဲ့ 1970 မှာ US နိုင်ငံမှာ ပေါင်မုန့်စားသုံးသူလျှော့ကျလာပေမဲ့ 1980 မှာတော့ ပြန်လည်မြင့်တတ်လာခဲ့တယ်။ ထို့နောက်မှာ Baker တွေဟာ Chemical တွေဆက်မသုံးတော့ပဲနဲ့ သဘာဝနည်းအတိုင်းသာ ကျန်းမာရေးအတွက်ဦးတည်ပြီးတော့ ပြန်လည်ပြီးပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် ပေါင်မုန့်ပညာရပ်ဟာ ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာရတာပဲဖြစ်ပါတယ် ။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ စားသုံးလေ့ရှိတဲ့ ပေါင်မုန့်ဟာ ခက်ခဲ့လှတဲ့ အချိန်တွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီး မာကျောလှတဲ့ ပေါင်မုန့်အသားတွကို အထပ်ထပ်ပြုလုပ်ပြီးမှ ချောမွတ်တဲ့မျက်နှာပြင်က စားရလွယ်ကူတဲ့ အခြေအနေကို ရောက်လာခဲ့တာပါ။
အဲ့တာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာ ပေါင်မုန့်ကို ပညာရပ်ကို အစဉ်အဆက် လက်ကမ်းသယ်တောင်လာခဲ့တဲ့ မုန့်ပညာရှင်တွေကို အမြဲအလေးထားပြီး လေးစားသင့်ပါတယ်လို့ ထင်မြင်မိပါတယ်။